नेपाली ठिटो, इटालीको राष्ट्रिय टोलीबाट फुटबल खेल्दै ! – Sunaulo Post
मुख्य पृष्ठ /खेलकुद/नेपाली ठिटो, इटालीको राष्ट्रिय टोलीबाट फुटबल खेल्दै !
पाली मुलुकका विकास मेराग्लीयाले युरोपमा हलचल मच्चाएका छन् । विकास यस्ता खेलाडी हुन् जो हिमालयको राज्य काठमाडौंबाट युरोपको इटाली राष्ट्रिय टोलीबाट खेल्दै छन् । उनले इटालीको जर्सी लगाउँदै यू–१७ बाट युथ युरोकप खेलेका छन् ।
सन् २००२ को नोभेम्बरमा विकास नेपालमा जन्मिएका थिए । विकाससँग हाल नेपाली र इटाली दुवै देशको पासपोर्ट छ । नेपालको ग्रामीण भेगमा जन्मिएको बताउने उनी आफ्नो पूरा नेपाली परिचय भने बताउन चाहँदैनन् । यो समाचार आजको सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पछ्याउँदा उनीसँग नेपालबाट एक जना व्यक्तिमात्र देखिन्छन् । जो पोखरामा एक रिसोर्ट व्यवसाय गरेर बसेका छन् । ती रिसोर्ट व्यवसायी पनि विकासबारे बोल्न चाहँदैनन् । तर, इटालीको सञ्चारमाध्यमका प्रकाशित समाचारअनुसार उनी शरणार्थीका रूपमा रहेको हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
विकास सानैमा इटाली पुगेका थिए । उनलाई नेपाल भ्रमणमा रहेको एक इटालियन बेलाउनो फेमिलीले इटाली पुर्याएका थिए । सोही फेमिलीले विकासको इटाली नाम विकास मेराग्लिया राखिदिएका थिए । हाल सोही नामबाट उनी इटालीमा परिचित छन् ।
फुटबल यात्रा विकासले आफ्नो फुटबल यात्रा इटालीको फिल्ट्रेस युथ टिमबाट सुरु गरेका थिए । अझै १७ वर्ष नपुगेका विकासले उक्त टिममा आफूलाई प्रमाणित गर्न सफल भए । प्रायः सेन्टर स्ट्राइकरको पोजिसनबाट खेल्ने उनी आवश्यकताअनुसार अट्याकिङ मिडफिल्डमा पनि खेल्न सक्ने क्षमता राख्छन् । सन् २०१३–१४ को सिजन जियोभानी बोसिको यू–१७ टिम दोस्रो भयो । जहाँ विकास सम्मिलित टिम भेनिससँग दुवै गेम ४–१ र २–० ले पराजित भएको थियो । सन् २०१५ मा १३ वर्ष पुगेका विकासले भेनेटो छोड्दै बेर्गामो पुगे ।